Wholesale Kunze KwePurazi Simbi Sisitimu Yeakakura huku Imba 8x3x2m Tende uye Greenhouse | Kukunda
Tafura yekupeta & Sachigaro
Bamboo bonde reSukkah
Yese-Mwaka Yekudzivirira Kavha ...
3-tier Kufamba-mu mini greenh ...
Yakachipa Pe Firimu Tunnel Greenh ...
Yakawedzera Huru Yakakwira Yakakwira mhando Ch ...
Bulk Mutengo weKisimusi Muti S ...
Kunze KwePurazi Simbi Sisitimu YeGuru Huku Imba 8x3x2m
10-29 Zvimedu 30-49 Zvidimbu
> = 50 Zvidimbu
$ 259.00 $ 249.00 $ 239.00
Iyi keji yakakodzera kune huku uye imbwa. Iyo kennel yemhuka ine padenga furemu yakagadzirirwa neyakagadzikana peturu yako uye chengetedzo mupfungwa uye zvinobatsira kuchengetedza chipfuwo chako kubva kunaya, chando, zuva, uye zvimwe.
1) kwakakurudzira simbi furemu, ngura & ngura nemishonga.
2) Yakakwirira mhando oxford jira nePVC kupfeka uye 100% isina mvura uye UV ekudzivirira.
3) Simbi yakakomberedzwa nepasi nepurasitiki.
38 * 1.0mm kwakakurudzira simbi chubhu
Yakasimba katoni kurongedza
Iyi keji yakakosha yekuchengeta huku iri mumayadhi madiki uye makuru, ichidzivirira huku kubva mukudzungaira, ichipa mvura uye kudzivirira zuva uye kuchengetedza huku dzakachengeteka kubva kuzvikara. Nepo kuvharwa uku kuchiitwa kunyanya nehuku mupfungwa, zvimwe zvisikwa zvakaita setsuro, imbwa diki uye Guinea nguruve zvinokura. Iyi yekumhanya yehuku inogadzirwa neakakurudzira tubing uye inoratidzira yakasimba simbi padenga rekuona kuti yakavharika kugadzikana nekufamba kwenguva. Kunyangwe zvirinani, huku dzako dzinogara dzichitonhorera, dzakaoma uye dzichifara nemucheka weOxford usina mvura unovhara padenga unodzivirira zuva uye unodzivirira mvura yemvura. Rinorema basa huku waya inovhara zvizere mativi, musuwo nedenga kuona kuti huku hadzigoni kutiza uye kudzivirira vaenzi vasina kukokwa kupinda mukati. chengetedzo. Iyi kitiki yehuku inouya nezvose zvaunoda kuvaka iyo yakavharika, kusanganisira mirayiridzo yegungano kuti ikubatsire iwe kuburikidza neyakareruka maitiro.
【Yakasimba Simbi Kuvaka】 Iyo peni yekuku inogadzirwa neyakareba mhando simbi furemu, yakasimba zvakakwana uye hazvisi nyore kukuvara, kubatisisa pasi kana uchishandiswa panze. Kunze, iyo inokurumidza-kubatanidza dhizaini inobvumira furemu kumisikidzwa zviri nyore mukati memaminitsi
Cover UV & Mvura inodzivirira Kavha】 Dzivirira huku yako kubva mumamiriro ekunze nekunze kwezvinhu. Denga rekumhanya kwehuku rine dhizaini dhizaini, rinobvumira mvura, marara uye chando chakareruka kuti chimhanye zviri nyore pane kuunganidzira, kuitira kuti iko iko kusagadzikana kwemamiriro ekunze uye kwekugara kukuru.
【Nyore Kuchenesa】 Chubhu yehombodo yakavharirwa zvekuti ngura inodzivirira uye nyore kuchengetedza nharaunda yakachena yehuku yako. Iyo isina kutsetseka nzvimbo iri nyore kuchenesa nejira nyoro kana imwe mvura inomhanya. Zvizarira zvehuku zvine latches hazvina kukodzera chete kuti iwe ufuye huku, asiwo kune dzimwe mhuka diki dzakadai setsuro nemadhadha, nezvimwe.
He PVC Hexagon simbi mambure, Solid & yakasimba, kwakakurudzira. maburi madiki ari pakati pemashure anowedzera chengetedzo uye musuo wakakiiwa simbi ine latch uye waya pajira rinopa dziviriro Huru kune huku dzako kubva kuzvikara zvinodya
Pashure: Yakakura Simbi Zvizarira Chicken Kumhanyisa Coop Kufamba Mukakatanwa Tsuro Madhadha Huku Yehuku Imba 6x3x2m
Zvadaro: Kupisa Kutengesa Premium PE Yakarukwa Kisimusi Muti Yekuchengetedza Bhegi
Kupeta Tende Gazebo
Pop Up Tende
Ndokumbirawo mubvunze kukura uye mangani aunoda, uye ndeipi chiteshi chengarava munyika yako padhuze newe, ipapo ini ndichaita yepamutemo CIF mutengo weako mareferenzi.
Yakachipa 3 × 3 Chiitiko Tende Kunze
Premium Kupeta Canopy Tende 10x15ft (3 × 4.5m)
40mm Gumbo Mbiri Heavy Duty Model Kupeta Tende ...
Kunze Kunotakurika Kupeta Tende 2x2m
Kunze Kwekupeta Gazebo Nemadziro Ekumashure 3x6m
Kunze Chiitiko Tende 3x3m
Kunze Kupeta Gazebo 3x3m
Get In Kukurukurirana
YEMAHARA KUSANGANA 0086-15358204830
Kero Kwete 1 Tianyuan Rd, Machinery Industrial Zone, Dongtai Guta, Jiangsu Province, PRChina